Manjaro 21.1.1 inosvika sekutanga kwaPahvo poindi yekuvandudza | Linux Vakapindwa muropa
Ino nguva, uye sezvataive tambojaira, panga pasina misiyano yenguva pakati peiyo vhezheni vhezheni uye iyo itsva ISO mufananidzo. Izvo zvakangoitika pamberi paPahvo apo vairamba vachiburitsa zvidzoreso zvekuisa zviripo asi kwete mifananidzo nekuti vaive nedambudziko rekugadzirisa. Saka masikati ano ivo vaparura Manjaro 21.1.1, uye, zvakanyanya kana tichifunga kuti inosvika mushure meiyo v21.1.0 yeiyo inoshanda sisitimu, haizove chikamu chitsva chinopinda munhoroondo.
Kuverenga iyo changelog, izvo zvakakosha zveManjaro 21.1.1 uye 2021-08-27 zvinoita sekunge ivo vakaramba vachivandudza GNOME 40.4 mapakeji, matsva eLibreOffice, kana kuwedzera iyo yazvino kernel vhezheni. Kune zvese zvimwe zvinhu, hapana chinoshamisa, sezvaungaverenga pazasi.
Pfungwa dzeManjaro 21.1.1 (uye 2021-08-27)
Dzimwe dzenzara dzakagadziridzwa. Zvekare zvakare tinoyeuchidzwa kuti iyo 5.12 nhepfenyuro yave kunzi EOL, zvinoreva kuti haichazogashira zvidzoreso. Iyo inonyanya kukwira-ku-zuva kernel ndeyeLinux 5.13.12, uye LTS 5.14.60.
Cutefish ikozvino pa0.4 1. An iso inowanikwa pa pano.
Firefox yakwira kusvika pa91.0.2.
NetworkManager ikozvino yave pa1.32.10.
LibreOffice ine maviri matsva vhezheni: 7.1.5 uye 7.2.0.
Mesa ikozvino yave pa21.2.1.
Zvimwe Gnome 40.4 inogadziridza.
Dzimwe KDE-git uye Python inogadziridza.
Zvimwe zvinowanzo gadziridzwa zvemapakeji akajairwa.
Manjaro 21.1.1 ISO mifananidzo atove kuwanikwa kubva ku peji rekurodha peji. Iwo mavhenekeri epamutemo ndiXfce, KDE, uye GNOME, asi iwo anopawo zvinonaka zvemunharaunda paBudgie, Cinnamon, Deepin, I3, MATE, uye Sway. Kubva kumahofisi epamutemo unogona kumisikidza mamwe madhesiki, senge iyo Cutefish yakataurwa mune yapfuura runyorwa.
Vashandisi varipo vane mapakeji ese aripo ekugadzirisa kubva kune imwecheteyo sisitimu yekushandisa, chimwe chinhu chatingaite kubva kuPamac (iyo Manjaro software Center) kana nemirairo sudo pacman -Syu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Manjaro 21.1.1 (2021-08-27) inosvika senge Pahvo yekutanga poindi inogadziridza neshanduko diki
EndeavorOS 2021-08-27 inounza nyowani yekushandisa ruzivo ruzivo, kugadzirisa muCalamares uye Linux 5.13